USouthgate akafuni kujatshulwe kusaphakwa e-England
UGareth Southgate akafuni kucatshangwe kude kakhulu ngeqembu lakhe le-England athi alinawo umlando omuhle ebholeni lamazwe ngamazwe. USouthgate ukusho lokhu ekhuluma nabezindaba ngaphambi komdlalo wabo owandulela owamanqamu kwi-Euro 2020.
I-England izogadulisana neDenmark eWembley Arena ngoLwesithathu ngo-9 ebusuku emdlalweni okulindeleke ushube kakhulu. Ozowina kulezi zinkunzi uzobe esenqwamana ne-Italy kowamanqamu ngempelasonto.
I-Italy izibekisele indawo kowamanqamu ngokushaya iSpain sekukhahlelwa amaphenathi enkundleni efanayo ngoLwesithathu. Ukuwina kwe-England ngo 4-0 kwi-Ukraine emzuliswaneni odlule kulo mqhudelwano kukhuphule amathemba okuthi izokwazi ukuqeda ishobolo leminyakanyaka.
Kodwa uSouthgate akafuni kuphakanyiswe amaphaphu kakhulu, ufuna kubhekwane nomdlalo ngamunye kubonakale ukuthi kufikwaphi.
“Asinawo umlando omuhle ngale ndlela esibuye sicabange ngayo,” usho kanje uSouthgate. “Laba badlali benza izinto ezinkulu kakhulu futhi bangamavulandlela aqopha izindlela ezintsha njalo nje.
“Sesifike esigabeni esisha kulo mqhudelwano futhi sinethuba lokuqhubekela phambili. Asikaze sifike kowamanqamu emqhudelwani wase-Europe ngakho singaba yiqembu lokuqala ukukwenza lokho. Kuyajabulisa kakhulu lokho kithi sonke,” kusho uSouthgate.
FUNDA NALA: OweBafana ujabule ngokuvula ngewin kwiCosafa Cup
Uthe izimbangi zabo, iDenmark iyona enethuba elingcono kwazise seyike yasidla lesi sicoco phambili ngakho iyakwazi okudingekayo. Wethembise ukuthi bazokulwela kodwa ukufika kowamanqamu.
“Asikaze siyiqukule indebe. IDenmark yona seyake yasiwina ngakho inerekhodi elingcono kunathi kodwa ngibona sengathi abantu bakithi (e-England) nayakulinbala lokho.
“Siyazi ukuthi sibhekene nembangi enhle kakhulu futhi kuzoba wumdlalo onzima kakhulu. Kodwa uzobe umuhle futhi ujabulisa kuwo wonke umuntu,” kusho uSouthgate. Uthe yena amaqhinga akhe ahambisana nesimo somdlalo.
Previous Previous post: URamoreboli ujabule ngokuqala ngewini kwiBafana
Next Next post: ILions ibukise ngeSharks ebithithiza ngathi isigwadi sibona intombi